warkii.com » Ganacsatada dalka Kenya oo UHURU ka codsaday inuu kala hadlo FARMAAJO
Muqdisho (warkii.com) – Ganacsatada beeraleyda qaadka ee Kenya ayaa qeyla dhaan ka muujiyay khasaare xoogan oo kasoo gaaray xayiraada ay dowladda federaalka Somalia kusoo rogtay duulimaadyada ka yimaada dalka Kenya sababo la xiriira badqabka caafimaad ee shacabka inta ay xaalada COVID-19 kasoo hagaageyso
Ganacsatada gobolka Miraa ee kasoo go’a qaadka loo soo dhoofiyo Somalia ayaa fariin ay saxaafadda u mariyeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxay u sheegeen in keydkii ay haysteen uu ka dhamaaday, wax ay cunnaana aysan heysan.
Sidaasi darteed waxay ka codsadeen inuu xiriir deg deg ah uu la sameeyo madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo si loo furo duuliyaadyada, xayiraadana laga qaado ganacsigooda.
Beeraleyda ka soo jeeda Nyambene ee Gobolka Meru, waxay aad uga soo go’a beerahooda qaadka Soomaaliya loo dhoofiyo ee nooca loo yaqaan Grade iyo Kiza iyo noocyo kala duwan oo si gaar ah loogu talagalay suuqa Soomaaliya.
Xubno ka tirsan ganacsatada qaadka iyo beeraleeyda oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha Miraa Moses Lichoro ayaa ugu yeeray Madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu la xiriiro dhiggiisa Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo si dib loogu bilaabo duulimaadyada xamuul.
Mr Lichoro wuxuu sheegay in beeralaydu ay u dhaceen keydkoodii kadib xayiraadii, haddana socoto bishii saddexaad, madaxweyne Uhuruna ay ka dalbaden inuu badbaadiyo ganacsigooda iyo noloshooda.
Wuxuu sheegay maadaama noocyada kala duwan ee qaadka hadda aysan lahayn suuq gudaha ah, ay ku qasbeen inay goostaan ​​geedahooda isla markaana mararka qaar ay tiro yar ka iibiyaan ganacsatada maxalliga ah.
“Waxaan keydinay waa dhamaadeen hadda beeraley badan ayaan awoodin inay inay helaan waxay cunaan maxaa yeelay ma haysanno meel aan ku iibin karno miraheena. Xaaladda ayaa kacsan Madaxweynahana waa inuu ku dhaqaaqo deg deg ah, lana xariiro dhigiisa Somalia, si dib loogu furo dhaqaalaha, deriskeenna oggolaanshaha duulimaadyada nooga dalbo, ”ayuu yiri Mr Lichoro.
Wuxuu sheegay in ka badan 50 shaqaale ah ay ka howl galaan beeraha qaatka maalin walba kahor inta uusan imaan “Covid-19.
“Ka hor intaan lagu dhawaaqin xiritaanka Covid-19, waxaan iibin lahaa miraa qiimahoodu ka badan yahay Sh3 milyan bil kasta. In ka badan 50 qof ayaa mushahar ka heli lahaa beeraleyda laakiin inbadan oo kamid ah hadda waa shaqo la’aan. Qaarkood weli waxay igu tiirsan yihiin raashinkooda maalinlaha ah. Noloshu aad ayey noogu adag tahay, ”ayuu yidhi yiri mid ka mid ah ganacsatada qaatka.
Mr Bernard Mwiti, oo ah nin Beeraley ah, wuxuu sheegay inuu sameyn jiryay Sh500,000 seddex bilood ka hor, laakiin hadda si dhib yar ayuu ku heli karaa Sh50,000.
Ms Felicity Makena, oo ah Beerale kale, ayaa sheegtay in xiritaanka maamulka hawadda Soomaaliya ay saameyn xun ku yeelatay dhaqaalihii soo korayay.
“Waxaan ku amaaneynaa Madaxweynaha sharciga u aqoonsaday miraa inuu yahay dalag lacageed. Miraa waa isha koowaad ee dakhliga Kabuitu laakiin suuq la’aan, waynu xusuusan doonnaa. Madaxweynaha waa inuu si xawli ah ku socdaa si xaaladda loo badbaadiyo, ayay tiri Ms Makena.
Soomaaliya ayaa xirtay hawadeeda waxayna xayirtay duulimaadyo xamuul oo aan ka ahayn sahay caafimaad, dabayaaqadii bishii Maarso kadib markii la arkay kiiskii ugu horreeyay ee Covid-19.
Horraantii Juun, dawladda Soomaaliya ayaa lagu soo warramey in ay ruqsadii kala noqotay laba shirkadood oo tahriibinayay qaat xili lagu guda jiray xayiraada la saaray duulimaadyada.
Sida laga soo xigtay Ururka Ganacsatada Miraa, Soomaaliya waxay qaadataa ilaa 50 tan oo miraa maalin kasta oo lagu qiimeeyo Sh100 milyan.